प्रदेस -२ को मुख्यमंत्रीमा महिला अघि सर्नुपर्छ: जसपा नेता कृष्णा सिंह - नेपालिक्स
➡️ प्रदेश २ कोरोनाको हटस्पट बनेको छ । समुदायस्तरबाट कोरोना संक्रमितहरु फेला परिरहेका छन् । प्रदेश २ मा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार चुकेको हो कि संघले सहयोग गरेन ?
➡️ जसरी प्रदेश २ मा आठ वटा मात्रै जिल्ला छन् । प्रदेश सरकारको आधाभन्दा बढी बजेट गत आर्थिक वर्षमा फ्रिज भएको अवस्था छ । प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश सरकारले कम्तीमा एउटा–एउटा ल्याब त राख्न सक्थ्यो नि ?
➡️ प्रदेश २ को सरकारप्रति तपाइँकै पार्टीका सांसदहरुले धेरै गुनासाहरु गरेका छन् । यो सरकारलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने मागहरु आएका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
➡️प्रदेश २ मा अहिले सरकारलाई निरन्तरता दिने कि परिवर्तन गर्ने ?
➡️ जसपाले अब बन्ने प्रदेश २ को सरकारमा महिलालाई मौका दिन सक्छ कि सक्दैन ?
➡️ महिलालाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन जसपालाई के अप्ठ्यारो छ त ?
— मुख्यमन्त्रीका लागि महिला नेतृले निर्वाचनको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । महिला नेतृत्वहरुले आफूलाई पहिला साबित गर्नुपर्छ कि म पनि मुख्यमन्त्रीलाई योग्य छु भनेर । रानी शर्मा, सुरिता साह लगायत अन्य महिला नेतृहरुले आफूलाई संसदीय दलका नेताका लागि म पनि योग्य छु भनेर आउनु त प-यो नि । उहाँहरु पनि चुनाव जितेर नै अहिले सांसद बन्नुभएको छ । संसदीय दलको नेताका लागि आफ्नो पार्टीभित्र लड्नुपर्ने हुन्छ । हारजित आफ्नो ठाउँमा छ तर दाबेदारी त छोड्नु हुँदैन नि ।
➡️ मुख्यमन्त्रीका लागि महिला नेतृहरु आफै अगाडि आउनुप-यो ?
➡️प्रदेश २ को सरकारमा रहेका अहिलेका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु जसरी आलोचित भइरहेका छन्, विभिन्न अनियमितता र भ्रष्टाचारमा उहाँहरु बदनाम भइरहेको छ । बाँकी कार्यकालका लागि पार्टीले नै महिलाई अवसर दिन किन अग्रसरता नदेखाउने त ?
— पार्टीले त सहयोग गर्न सबैका लागि तयार हुन्छ । पार्टीका लागि मो. लालबाबु राउत गद्दी, जितेन्द्र सोनल धेरै नजिक र महिला नेतृहरु टाढा भन्ने छैन । पार्टी आफैले कुनै व्यक्तिलाई अगाडि बढाउँदैन । मुख्यमन्त्रीका लागि महिला नेतृले पहिला आफू पनि योग्य हुँ भनेर अगाडि त बढ्नुप-यो । प्रदेश २ का सांसदहरुमा महिला नेतृहरु कोही वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोही महासचिव, केन्द्रीयस्तरका नेतृहरु हुनुहुन्छ । महिला नेतृहरुको पनि प्रोटोकल उच्च नै छ, चुनावमा प्रत्यक्षरुपमा जितेर आउनुभएको छ भने दाबेदारी दिन किन न मिल्ने ? मुख्यमन्त्रीका लागि आफ्नो समर्थक र प्रस्तावकसहित महिला नेतृ अगाडि त बढ्नुप-यो कि अब प्रदेश हाँक्ने मौका दिनुस् । त्यसपछि हामी साथ दिन्छौं । जबसम्म उहाँहरुले इच्छा व्यक्त गर्नुहुन्न तब हामीले मात्रै भनेर हुँदेन ।
(🔄मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
Tags: #कृष्णा, #प्रदेसभा-२, #महिला, #सिंह
Previous रुन्चे मुख्यमंत्री, कोरोना नियंत्रणमा संघीय सरकारले मद्दत गरेन!
Next कुलमानको कार्यकाल थप्ने कुनै प्रस्ताव गएको छैन: उर्जा मन्त्रालय, यता बधाईको ओइरो